Labsa “Mootummaan Ce’umsaa ABOn hoogganamu hundeeffamuu qaba” jedhu irratti yaada QBO – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioLabsa “Mootummaan Ce’umsaa ABOn hoogganamu hundeeffamuu qaba” jedhu irratti yaada QBO
Labsa “Mootummaan Ce’umsaa ABOn hoogganamu hundeeffamuu qaba” jedhu irratti yaada QBO
አማርኛ ዜና – የበጀት ድጎማ የማቋረጥ ውሳኔ ሃገሪቱን የሚበታትን እንደሆነ ተገለፀ። መስከረም 28/2013 ዓ/ም
አማርኛ ዜና – ኦነግ በኦሮምያ የሽግግር መንግስት በአስቸኳይ እንዲቋቋም ጠየቀ። መስከረም 28/2013 ዓ/ም
Jeneraal daawud ibsaa ayyaanaa hayyuu siyaasa biyyattiifii adeemsa Ergamtoota wayyaaneef nafxanyaa sirriitti bilcheesee bare.
#Lamrot_Kamal bitanii akka Hacaaluu ajjeeftu erga godhanii booda diraamaan isaanii itti baramnaan Laamrootitti deebi’uuf dirqaman. Lamrot qarshii nyaachuuf goota nurraa galaafatte dubbiin qabatte. “Gara itti jalaa baanu hin qabnu kan ajjeefte isiidha jennee garuu akka nuti harka keessaa hin qabne fakkeessuun Shaneetu ergate jenna” jedhanii diraamaa kutaa 2ffaa bifa haaraa eegalan. Amma isiirratti himannaan baname. Lamroot maallaqa nyaachuuf jettee goota keenya galaafatte ofiifis dhumarratte nyaatamuun hin oolle.
Akka himannaan irratti baname ibsutti Hacaaluu ajjeessuuf eega karoora baafatan booda, Waxabajjii 29 Hacaaluu waliin walii beellamte. Namni Hacaaluu ajjeesu garuu bakka kondominiyeemii Galaan jedhamutti karaatti eega. Lamrot sa’aatii 12tti Hacaaluu waliin wal qunnamte. Erga wal arganii booda makiinuma Hacaaluutiin gara kondominiyeemii Galaan deeman goote. Yeroo kondominiyeemii Galaan gahan “na dhukkubaa waan jiruuf karaa irraa gorii naa dhaabi maaloo” jetteen. Namni achitti akka ajjeesuuf qopheeffatte achitti hacaaluu galaafatedha akkaataan ittiin himatamte.
Diraamaan tolfamaa tolfame garuu namni Lamrot waliin walii galanii karaatti eegee ajjeesse Shanee kan jedhudha. “Lamrot akka ajjeefte ykn ajjeesisiifte irra gahamee jira waan taheef Shaneetti irkifnee isii tahuu himnu malee karaan itti ummata jalaa itti miliqnu hin jiru” jedhaniiti. Lamrot goota keenyas nyaattee ofiifis nyaatamte dhumarratti. Gabaabumatti mootummaan akka ajjeese kuni ragaa guddaadha. Nama duraan dhokse kan ummatni isiitu ajjeese jedhee iyyaa ture rakkatanii amanan.